0 zvinhu zviri mumotokari yako
Wedzera vana menyu
Matambo uye Hobbies
Tsvaga yako Order
menyu Account ngoro USD
Sarudza mari USD GBP CAD EUR X
Tsamba yako yekutumira Shamba yako haina kudhinda chero mapepa e blog. A blog inogona kushandiswa kutaura pamusoro pezvitsva zvitsva, mazano, kana mamwe mashoko iwe waunoda kugovana nevatengi vako. Iwe unogona kuona Shopify ye ecommerce blog yekufemerwa uye mazano kune rako rega rega uye blog.
Tumira kuhurukuro yedu yezvinyorwa zvitsva uye zvipo zvinokosha.
Mutambo Wing $13.98
Ruvara rweMermaid Rwakanaka $19.78
Anoshamisa Mukadzi Koshitomu $27.99
Jack-o-lantern Pirnted Sleeveless Pamusoro $12.62
Halloween Skeleton Zvipfeko $27.97
Harley Quinn Zvipfeko $32.49
Red Kutasira Koshitomu $36.99
Miss Demeanor Koshitomu $27.55
Harry Potter Wallet Bhegi $24.99
Harry Potter Pallet Bhegi $14.39
Harry Potter Bhegi Bhegi $26.79
Halloween Skeleton Sude Dhindaina Risina $11.39
Vakadzi Halloween Unicorn Yakatsemurwa Dhinda Kumusoro $11.89
Halloween Lace Panel Chipfeko $27.38
Halloween Pumpkins Mwenje Hurefu Kupfeka $29.78
Kutya White Muroyi $15.26
Vampire Mazino kubva $8.98
Tenga Shamba Yedu Yakakwirira Svetai
Vakadzi Vakagadzirira Kupfeka
Vakadzi FASHION ACCESSORies
Ona maitiro ekupfeka
Kutarisa Maxi kupfeka
Ingori yakapfava mini
Nhema Smart Kwese
Imwe Dope Chivakawandisa
Rara kumusoro 2PCS SET
Solid Knitted 2 Piece Set
Kupisa Kupisa Maxi Kupfeka
Zhizha Wedge Heel
Kunze Mesh Antislip Kumhanya Shangu
Chiedza Chinofuridzira Women Running Shoes
Akatwasuka eBrazil Anobuditswa Lace Wig Yakanatswa Yasina Kujeka yakazara Lace Wig Remy
Jamaican Bounce Crochet Bvudzi Jumbo Braid Synthetic
1 / 3 / 4 pc Natural Ruvara 8-26inch yeBrazil Bvudzi Weave Bundles Isiri Remy Human Bvudzi Kuwedzeredzwa.
YeBrazil Curly Bvudzi Revanhu Wig Yevatema Vakadzi 130 150 250 Density Lace Wig
Bhurukwa Rakananga Bvudzi 613 Uchi Blonde Zvisungo 1 / 3 / 4
Kongy Kinky Curly Yevhudzi Vhudzi Wigs Kune Vakadzi Vatema
Brazilian Bvudzi Rakaputirwa Zvisungo NeFontal
13X4 Yakatora Yakatorerwa Remy yeBrazil Muviri Wakavingwa Lace Frontal Wigs NeBvudzi Revacheche Kune Vakadzi Vatema.
Brazilian Bvudzi Weave Zvisungo Muviri Wave Wave Mabhanji NeFaidhi Yebvudzi revanhu 2 / 3
Bhurawu Rakananga Bvudzi Rakarukwa Zvisungo 100% Bvudzi Revanhu Bhudzi
MULTI-FUNCTION ROLLING COOLER YAKADZIDZWA PASI YOKUDZISA PICNIC FOLDABLE TABLE / FREEZER KITCHEN DEVICE
Vakadzi Vakagadzirira Kupfeka Kupfeka
Kuishandisa iyo Maxi Kupfeka
Kuichengeta iri nyore Maxi kupfeka
Green Mermaid Maxi Kupfeka
Back View View Maxi nguo
Akafananidzwa Rose Maxi Dress
Tora Me In Off Shoulder Bodycon
Bluetooth Smart Kutarisa Varume Q18 Ine Kubata Screen
MTK2502 Wrist Smartwatch yeIOS Android Smartphone
iplay8 Mahwendefa 7.85 inch
iplay9 3G Nhare / Tablet 9.6 inch
10.6 inch 1920 * 1080 IPS Quad-core piritsi
QearFun Cartoon Rabbit Nzeve Hook Wired Nzeve Nhare
TOPROAD Foldable Flashing Inobwinya Cat Cat Headphones
mhizha8 Air Pro 8inch Tablet PC Windows10 & Android 5.1
I12 tws Pop dzisina kushandiswa Bluetooth Tora Kudzora Musoro
Causal tracksuit Set
Strip yemitambo sutu 2pc yakaiswa
Zuva Rakazara Rinobvumira Jeans Kuputika
Single Yakabatwa Pfupi Jumpsuit
Mazambiringa Anodzvinyirirwa Mavhiriji eBhaibheri maJeans
Sungaira Sleeveless Tank Top uye Shorts
Maoko pamusoro pangu bodycon
mugove Tweet kubayirira naro +1
Multi-Ruvara Crop Pamusoro Wide Gumbo Pants 2PC SET
Anodavirwa Yakatsemurwa Anosvetuka
Wife MOM BOSS Pamusoro
Love Mwoyo Kuparadzanisa Mini Dress
3 / 4 Chiffon Chipfeko
Kusununguka Kunze Kwakawanda Kwakaitwa
Kutamba Zvisina Sleeve Dress
Kupisa Inotapira Pink Leopard Hoodie 2pcs SET
Tassel Flying Sleeve Yakapfeka
Kufukidza Denim Pants
kubva kuongororo ye2853
Ndatenda zvikuru nekukurumidza kukurumidza kutumira pasina kutaura chinhu chikuru chekutenda
Bhurukwa Rakanamira Bvudzi Rakarongedza Zvisungo Kwete Remy Bvudzi Revanhu 1B / # 2 / # 4 / # 27 / # 99J / Burgundy Ombre Bvudzi Bundles 8-30 Inch
Tinoda imi vakomana & inouya painoti zvinoita
Saizi 22 nguva uye saizi ye24
Ini handisati ndamisa bvudzi parizvino, asi ma curls akanaka uye marefu ari echokwadi. Ini ndichave ndichinyatsodaira zvakare!
Malaysian Bvudzi Kinky Curly Yakawedzera Bvudzi Revanhu Natural Colour 1 / 3 / 4pc 100g
Bvudzi rinotyisa! Tinodaira zvakare.
yakanakisa bvudzi rakapfava senge pikicha ini ndinokurudzira mutengesi iye aripo chaizvo
Anoshamisa bvudzi, kuda zvese nezvazvo. Iko hakuna mumvuri zvachose, wakapfava uye wakangonaka. Ndiri kufara zvikuru kusona pairi.
Ndinoda bvudzi rangu. kukurumidza kutumira. kutaurirana pane pfungwa. ndokutenda zvikuru. inonyatso kuraira zvakare.
Ini ndiri mutsva weAn Ali mushandisi uye mutengesi uyu akandifadza kwazvo. Ndiri kufara nemabatirwo andakaitwa naKaren. Kutanga kubva, ini ndakawana vhudzi mukati me50 maawa ekura. Yainzwa kunge mashiripiti, bvudzi racho rakanga rakangoita sepikicha, rakapfava kwazvo uye rakanyorova; zvakangoita ganda toned uye magineti. Ndakaiyedza uye ndikashuva dai ndakanga ndaraira maira akareba, nekuti ndakachaira 22inches. Zvinoshamisa kuti Pandakaudza mutengesi, vakandibatsira nekero yemunharaunda kuti vadzoke uye vakandipa mari yakakwana kunyangwe pasina rubatsiro rweAli Express, ivo havana kundiitira kunetseka nemari yangu. Iye zvino ini ndiri kutora yangu 26 inches uye ndichaisa mafoto kana ini ndaisa. Kana iwe unogona kuzvitarisa kunze pane yangu Instagram, ndinodonhedza mubato wangu Ino ndiyo yangu 22inch body wave bvudzi. Iko kuendesa iko kwakakurumidza kumhanya, ndiri kufadzwa zvikuru nekutenda, ndichagadzirisa gare gare.
Raka bvudzi iri kuna sisi vangu. Iye anoida
yakagamuchira bvudzi mumazuva e3. ino yangu yekutanga nguva yekuraira vhudzi pamhepo everr uye ini zvirokwazvo ndichave ndichiraira kubva pano zvakare. mutengesi akanyatso kundichengetedza ndokuvandudzwa neni. zvirokwazvo kuenda kuodha zvakare Hapana kunhuhwirira uye gobvu akasungwa
Brazilian Bvudzi Rakapfeka Ne Remy Kuvhara Bvudzi Revanhu 2 / 3 Zvisungo
Chigadzirwa chacho chakanyatsoruramisa, i 3 bundles (22 24 26) & frontal. Giredhi yakanaka. Ndakaibatanidza nayo, haina kuwana kujeka sekuda kwandaida kuita asi izvo zvaive zvakanaka ... zvachose ndakagutsikana uye ndichava mutengi anodzoka. Ah uye kana yako yekubvunzisisa iko kwechokwadi kweye kuongororwa ivo vane chokwadi ichi chiri kubva kumunhu chaiye asina promo rakabhadharwa !!
Bhiridha Muviri Wave Wave 3 Yakasungwa Nevhudzi Revanhu
Zvakanaka saka bvudzi rakanaka. Tora zvakanaka kubhururuka. Hazvina kutora nguva kuti ndisvike kumba kwangu. Bk NY. Bvudzi rakanga risingafunge saka ndainyatsotaridzika kunge ndakasikwa. Dhizaini inodururwa yakawanda uye inonyatsogara tangle yakasununguka. Saka hongu yall inogona kuitenga. Izvo ndezvechokwadi pamutengo. Ita shuwa iwe uvaudze kuti vatorese nekuvhara kwako nemazvo. Kukanganisa chete ndiko kwandakareva.
Ndakagamuchira bvudzi nekukurumidza. Ini ndaisada kutanha bvudzi rakawanda. Ndakawana yakawanda yekumurumbidza uye bvudzi harina kudurura zvakawanda.
Kutumira kwakakurumidza. Ida zvese nezvebvudzi.
Brazilian Yakaregedzera Wave 3 Yakasungwa Nevharira Yasina Remy Bvudzi Revanhu
hausati waisa bvudzi parizvino
Bvudzi rakapinda mukati me2-3 mazuva mushure mekuraira, ndinoda urefu uye hwaive husina kana hwema. Bvudzi rakapfava uye rakakwirisa. Ini zvechokwadi ndichave ndichiraira zvakare. Nditevere pa instagram _.drvka uye Twitter pa @Andricapratt. Mushure mekuisa iyo yaive yakanaka uye nyowani
Bvudzi rakanaka, rechokwadi kusvika kureba, mutengesi raifadza chaizvo uye richikurumidza kupindura! Ndiri kurairazve !!!! Bvudzi rakanaka, haridurure, ini ndinorida uye handigoni kumirira kuti ndiise kumwe kurongeka, ndinokurudzira
Iyi wigi inoshamisa. Iyo nzira ye curl inoshamisa. Iyo wigi yakapfava kwazvo. Ini ndinokurudzira zvikuru. Bvudzi rakanaka. Zvinyoro kwazvo uye zvizere.
Bvudzi hombe ndaida bvudzi rinokurumidza kuti pikicha uye ndikakumbira baba vangu kuti vandiyedze bvudzi uye ndizvo zvavakandiwanira. Yangu hairylist yakaita bvudzi rive wig uye ini ndakadzoreredza bvudzi nezve 4 nguva neiyo yakafanana kumberi. Iyi haisi vhudzi re 14 inch asi iyo 26 inch.
Ida iyo Heek bvudzi rakapfava mukati mezuva re4 muNetherlands!
Chigadzirwa zvinoenderana nerondedzero.
yakaraira iyi wig thursday (8 / 8 / 19) uye neunyanzvi yakauya monday (8 / 12 / 19). akanyorova uye akanaka wig. urefu hwakakwana hwezhizha. huwandu hwakanaka hwekudurura asi hapana chakashata. gobvu kwazvo. yakanaka sarudzo yekutanga wig. iyo yekutanga mufananidzo ndeyekuti iyo wig inotaridzika kutsva kunze kwehombodo uye yechipiri mufananidzo iwigi rakanyorova ndakagadziriswa uye ndakaisa iyi wig ndega. kamwe agin rakapfava kwazvo, rinogona kurongeka, rakakwana urefu zhizha. akaita yakanaka yekutanga official wig
Zvese zviri muoda rudo bvudzi nyoro nyoro yakatora 1 vhiki kugamuchira.thank u
Claud R kujit
American Express Diners Club Discover JCB Mastercard PayPal Venmo vhiza
Copyright © 2019 dirtprice. All Rights Reserved.